QM iyo DFS oo daah-furay qorshe lagu gar-gaarayo 3 milyan oo qof – Idil News
July 29, 2021 | Ilyaas Bedel Gaboose oo noqday Xildhibaankii ugu horeeyay ee la doortay 2021
July 29, 2021 | XOG: Axmed Madoobe oo deyn ka bixiyay Guddoomiyihii hore ee Gobalka Gedo & Farmaajo
QM iyo DFS oo daah-furay qorshe lagu gar-gaarayo 3 milyan oo qof
WDowladda Federalka Somaaliya, Qaramada Midoobay iyo Hay’adda Bani’aadamnimada ayaa maanta daah furahay qorshaha arimaha bani’aadamnimada ee Soomaaliya ee 2020. Qorshahan ayaa ubahan 1.03 bilyan oo doolar, si loo caawiyo loona tageero noolal maalmeedka 3 milyan oo qof.
“Dowladda federalka ee Somaaliya ayaa waxaa si buuxda ugu go,an iney la shaqeeyso hay’adaha samafalka ee ka shaqeeya dalka si loo hirgeliyo qorshaha ka jawaabita xaaladaha bina’aadamnimada,” sidaasi waxaa yir Xamza Siciid Xamza, wasiirka Wasaarada Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka. “Qorshaha gurmadka ayaa dhameystiraya dadaallada socda ee dowladda fedaraalka ee wax looga qabanaayo dhibaatooyinka bina’aadamnimo ee dalka.
Dadka u baahan gargaarka waxaa kamid ah 1.7 milyan oo qof oo ka barakacay colaad, nabadgelyo xumo, guuritaan Khasab ah, abaaro iyo daadad. Sida laga soo xiganaayo qorsha HRP-ga, in kabadan kalabar tirada dadka soomaalida waxay ku nool yihiin faqri.
Waxaa kamid ah beeraley iyo xoola dhaqatada saboolka ah iyo cunta yare heysato kuwa barakacay. Heerka nafaqo xumida ee caruurta ayaa ah mid aad u sareeyo, iyadoo meelaha qaar ay ka jiraan heerar nafaqo xumo oo caalami ah in ka badan 20 boqolkiiba (kana sareeysa heerka deg degga ee WHO ee 15 boqolkiiba). Dadka naafada ah oo lagu qiyaaso boqolkiiba 15 dadweynaha ayaa halis ugu jira rabshado iyo xadgudub.
“Marka aan hirgalinayno qorshaha arimaha bani’aadamnimada, Qaramad Midoobe iyo iskaashatada kale ayaa ka shaqeyneyso sidii loo xaqiijin lahaa in gargaar deg deg ah iyo tageero horumarineed ay isbarbar socdaan kuwaas oo kabo qorshaha hormarinned e dowladda si loo gaaro soo kabasho mudo fog ku beegan” sidaasi waxaa yiri Adam Abdulmoula,Isu duwaha hawlaha Bani’aadamnimada ee Somaliya. “taasi ayaa aha in la kordhiyo howlaha samafalka iyo horumarka wada socda mudo dheer si wax looga qabto xaladaha bani’aadamnimadan ee ka jiro Soomaaliya”
Qorshaha arimaha bani’aadamnimada wuxuu diiradda saaryaa afar ujeedo oo asaasi ah: yareynta baahsanaanta nafaqa xumada ba’an iyo baahiyaha iyo caafimaadka, baahiya asaasiga ey wajahaan dad ku nool 74 degmo, xoojinta iyo ilaalinta xuquuqda aadamaha, islamarkan ilaalinta sharafta, sidoo kale kor u qaadidda aqoonta dadka barakacayaasha.
Qorshahan ayaa ujeedkiisa yahay bixinta gargaar cunna ah bil kasta oo la siinaayo ilaa 2.1 milyan oo qof , in la taageero helitaanka waxbarasho oo loogu tala galay in kabadan 300,000 oo caruur ah, in gargaar caafimaad la siiyo 2.5 milyan qof, in biyo nadiifa la siiyo in kabadan 1.2 milyan oo qof iyo in la yareeyo khatarta la xiriirta isku dhacyada ooy ka mid yihiin kuwo ku saleysan jinsiga.
Sannadkan, wadarta guud ee baahida loo baahan yahay deeq-lacageedka Qqorshahan ayaa hoos u dhacday 11 boqolkiiba (ama US $ 120 milyan) taas oo horay u eheed $ 1.12 bilyan sanadka 2019 illaa $ 1.03 bilyan.
In kasta oo tirada dadka baahan ay kortay 19 boqolkiiba (ama 1 milyan oo qof) laga soo bilaabo 4.2 milyan 2109 ilaa 5.2 milyan qof. Tirada guud ee la beegsaday ayaa hoos u dhacday 12 boqolkiiba (ama 400,000 oo qof), taas oo sanadkii hore gaareseysay ilaa 3.4 milyan kuna soo dhacday 3 milyan oo qof (58 boqolkiiba 5.2 milyan qof oo u baahan gargaarka bini’aadannimo).